Ny toro-hevitra tsara indrindra amin'ny fananganana tranonkala iray ao amin'ny Internet dia ny tokony hifantohanao amin'ny faritra manokana sy manokana (A Niche) - ny votoatinao rehetra dia tokony hifandray amin'io nika io.
Raha efa manana raharaham-barotra azonao entana an-tserasera ianao dia ho mazava tsara ny indostria ary ho fantatrao ny momba ny loha-hevitrao, raha toa ka nanapa-kevitra ny hanomboka amin'ny zero ianao dia manana safidy hifidy karazan-drivotra foto-kevitra.
Ity fantsona na fanatanjahantena ity dia ny fitadiavana ny karoka fitadiavana rehefa mametraka ny tranokalanao amin'ny valin'ny fikarohana.
Raha toa ianao ka manomboka sy mitantana orinasa an-tserasera vaovao dia tokony hifidy faritra iray ianao mahaliana amin'ny fikarakarana amin'ny fotoana maharitra, raha manangona sehatry ny fandraharahana an-tserasera ianao noho ny antony ara-barotra nataonao noho ny antony ara-barotra ary nahatonga ny tetikasa lavitra loatra.
Raha tsy mametraka orinasa tsy miankina an-tserasera ianao ary miezaka mitady ny sehatra manokana anao ianao dia andramo ireto teknika ireto;
• Inona ny lohahevitra atrehin'ny olona hafa momba ny torohevitrao?
• Jereo ireo boky novidinao
· Inona ireo gazetiboky azonao jerena?
• Inona avy ny fandaharana amin'ny fahitalavitra tianao indrindra?
• Inona avy ireo lohahevitra hitanao amin'ny resaka sosialy?
• Inona avy ireo olom-pehezin'ny olona hafa tonga aminao?
• Inona no hitanao fa mora atao ary inona no azo atao?
Diniho fotsiny eo amin'ny fiainanao sy ny asa aman-draharahanao ny fanamafisana ny tombotsoanao sy ny tranokala.
Eritrereto tsara ireo fanontaniana ireo ary soraty izay hevitra rehetra azonao mba hahitana lohahevitra azonao atao mandritra ny volana sy taona ho avy tsy misy fahalianana, miaraka amin'ny tanjona ho lasa manam-pahaizana fantatra.
Mandehana ary aza mitsahatra mihitsy - mora izany.